सिकेसँगको सम्झौता प्रष्ट पार « Janata Samachar
सिकेसँगको सम्झौता प्रष्ट पार
प्रकाशित मिति : 11 March, 2019 9:09 am
जसले जे मागेको हो, त्यही पायौँ भनेर उत्सव मनाइरहँदा दिनेले ढाँट्नुको अर्थ छैन
शुक्रबार स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन र सरकारबीच भएको ११ बुँदे सहमतिपछि मुलुकको राजनीतिक कोर्समा अर्को क्रमभंगताले चर्चा पाएको छ । देश टुक्र्याउँछु र १ करोड ३२ लाख जनताको स्वतन्त्र मधेस बनाउँछु भन्ने डा. सिके राउतसँग हठात् गरिएको सम्झौतामा कयौँ त्रुटि र द्विअर्थी भाषाले जनमनमा शंकाको डढेलो लागेको छ । यो डढेलो निभाउने जिम्मा राज्यकै हो । नागरिकता विधेयक संशोधनका नाममा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले अरु राष्ट्रघातको बाटो पक्डेको भनेर सत्तारुढ नेकपा पक्षधरकै नेताहरुले विरोध गरिरहँदा जेलमा बसेका एउटा व्यक्तिको समूहसँग अर्को देशसँग सम्झौता गरेको भाषामा किन सहमति भयो ? जनताले मागेको जवाफ यति नै हो । देश टुक्र्याउँछु भन्नेलाई मैले गल्ती गरेँ, म मूलधारको राजनीतिमा आउँछु भनेर वक्तव्य दिन लगाउने काम पनि नभएको भन्दै गरिएको आलोचनामा सरकार सञ्चालकहरुले कालो अनुहार पार्नु पर्ने कारण छैन । देश टुक्र्याउँछु भन्नेलाई माफी, कल्पना परको विषय हो । तर सरकारले किन राउत पक्षधरसँग खुट्टा कमाएर दुर्भाग्यपूर्ण सहमति ग¥यो, पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम यसैमा केन्द्रित छ ।
सहमति विपरीत तराई मधेसमा उत्सव मनाउने काम भएको हो भने किन उनीहरुलाई उत्तेजित नहुन निर्देशन नदिने ? देश टुक्रिने उत्सव मनाउन किन दिने ?
आइतबार जनकपुरमा सिके राउत पक्षधरलाई सुरक्षा दिने बुलेट प्रुफ सुरक्षा दस्ता को थिए ? उनीहरु कोबाट परिचालित छन् ? उनीहरुले पर्चाबाजी गरेको ‘फ्रि मधेस’को अर्थ के हो ? नेपालको अक्षुण्णता, अखण्डताबारे के सरकारले जनमत संग्रह गर्छु भनेर खुट्टा कमाएकै हो ? हो भने नेपालको भूगोल टुटफुट पार्नु पर्ने बाध्यता के हो ? कोही एउटा समूह अलग हुन चाहँदैमा देश जनमत संग्रहमा जानु पर्छ ? हो भने अब देश टुक्रने बाटोमा गयो भनेर गरिएको चिन्तामा किन दुई तिहाइका सरकारका मन्त्रीहरुको बोली प्रष्ट हुन सकिरहेको छैन ? सरकारले आफ्नै पार्टीका नेताहरुलाई सम्झाउन बुझाउन सकिरहेको छैन । यो दुर्दशाले नेपाली जनमनमा पसेको शंका दूर गर्न सकिरहेको छैन । यतिसम्मकी, स्वयम् मधेसवादी दलहरु नै सहमतिबारे बेखबर छन् ।
२०७४ निर्वाचनमा मधेसका मतदातालाई चुनाव चिन्ह बाहिर (कोठली बाहर) मतदान गर्न अपिल गरेका सिके राउतका कार्यकर्ताहरुले आइतबार जनकपुरमा मनाएको उत्सवको अर्थ हो फ्रि मधेस । यसको अर्थ हो, सरकार जनमत संग्रहमा जान तयार । तर सरकारले जनमत संग्रहको कुरा भएको छैन भनेर ढाँटेको छ । जसले जे मागेको हो, त्यही पायौँ भनेर उत्सव मनाइरहँदा दिनेले ढाँट्नुको अर्थ छैन । १५ प्रतिशत मत कोठली बाहिरमा सफलता प्राप्त गरेको सिके राउत पक्षधर भन्दा मधेसवादी दलहरु मधेसको मुद्दा र जनतासँग जिम्मेवार छन् । त्यहाँको प्रदेश सरकारले के भएको भन्ने जानकारी पाउनु पर्छ । जताततै असन्तुष्टिको आगो बालेर आक्रोश मात्र उत्पादन गर्ने सरकारी मक्सद हो भने यसले देशमा अब निम्त्याउने बित्यास, विध्वंश र विकृत कलंकको टीका लगाउन तयार हुनुपर्छ । अझै पनि समय छ कि, सहमतिमा भएको के हो ? सहमति विपरीत तराई मधेसमा उत्सव मनाउने काम भएको हो भने किन उनीहरुलाई उत्तेजित नहुन निर्देशन नदिने ? देश टुक्रिने उत्सव मनाउन किन दिने ? सरकार, लोकप्रियताको सगरमाथाबाट खुर्मुरिएर नाम्चे बजार झर्ने घडी खोजिरहेको त होइन ? प्रश्न जीवितै छ ।
आइतबार जनकपुरमा सिके राउत पक्षधरलाई सुरक्षा दिने बुलेट प्रुफ सुरक्षा दस्ता को थिए ? उनीहरु कोबाट परिचालित छन् ? उनीहरुले पर्चाबाजी गरेको ‘फ्रि मधेस’को अर्थ के हो ?
मेष– व्यस्तता बढ्नेछ, काममा सफलता मिल्नेछ । वृष– कुटुम्ब सहयोग मिल्नेछ, भोजनको सुख पाइनेछ । मिथुन– सहयोगमा